Mpanamboatra trano, mpamatsy, orinasa - mihena, mihena kankana, boaty kankana, boaty planeta, mihena hafainganam-pandeha, mpamadika, helikaly, paingotra vy, boaty fambolena, giratra traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Manomboha tetikasa iray
Ny fitaovana HZPT dia nandalo ny fanamarinana ISO 9001. Ny trano fanamboarana anay dia nandalo fanamarinana TS 16949.
Mampiasà fotokevitra malefaka hanoritana endrika ny fizotry ny asa mba hanesorana ireo dingana tsy misy lanjany
Mametraha fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa mankany amin'ny rojom-panomezana
Jereo ny Asanay
+ Kodiarana servo worm servo zoro ambany miverina
+ Ireo mpanova hafainganam-pandeha UDL
+ Reducer kankana
+ Reducers fitaovana cycloidal
+ Gearbox ho an'ny milina fambolena
+ Kitapo boaty planeta
+ Motors misy motera mandeha amin'ny herinaratra
+ Motera miolakolaka spiraly
+ Gearboxes ho an'ny dian-tongotra sy fiara
+ Reducers sy boaty fanamboarana manokana
+ Gearboxes ho an'ny rafitra fanondrahana
+ Mpikirakira kankana sy bevel
+ Motera miady habe kely DC
+ Rafitra fandefasana ho an'ny mixer TMR
+ SMR Shaft Mounted Reduce
+ Mpitondra planeta
+ Paoma peratra
+ Fitaovana peratra helical
+ Fitaovana samihafa
+ Porofon-tselatra sy vongan-by
+ Ampiasao ny peratra sy ny helikela
+ Kodiarana sy kankana
+ Fitaovam-piadiana bevelle sy fehin-kibo sprial
+ Sandrema toriteny
+ Fitaovana traktera
+ Fitaovana forklift
+ Tselatra girara
+ Gears ho an'ny paompy menaka
+ Slewing perle / Slewing Bearing
+ Paompy Gear
+ Heloka goavambe
+ Rafitra familiana hydraulic
+ Motera andiany Y2
+ Motera andiany Y
+ Motors YD andian-dahatsoratra haingam-pandeha
+ Motera andiany YS
+ Motera andiany YC YL
+ Motera YEJ
+ Ireo singa mortor
+ Motera fitoviana TYGZ
+ Motera fitoviana TYBZ
+ Motera borosy dc
+ Motera tsy dia fahita amin'ny tany-maharitra-maharitra (REPM MOTORS)
HZPT dia Manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana karazan-java-mirindra sy boaty fanamoriana & reducer hafainganana toy ny: Reducer kankana NRV (boaty kankana NMRV), reducer hafainganam-pandeha kankana vy, reducer haingam-pandeha helikaly mijidina, reducer helikaly mifanitsy, helika reducer gear kankana, reducer aorin-damosin-damosin-damosina kely, kitapo miendrika backlash ambany, boaty fiompiana fambolena, boatin-trakitra, boaty fiara, boaty planeta
Ny fampifangaroana ny varotra, ny indostria ary ny haitao amin'ny ankapobeny, Hangzhou Ever-power Machinary Co., Ltd dia mpamokatra reducers hafainganam-pandeha any China ary orinasa mpamokatra «reducers» haingam-pandeha, manampahaizana manokana izahay amin'ny famokarana haingam-pandeha, boaty ho an'ny kitapo, fitaovam-piadiana mafana ary boaty fitifirana. Izy io dia natokana hanome vahaolana manokana, mahomby ary humanista.
Hiditra eto ny votoatinao. Manova na manafoana ity lahatsoratra an-tsoratra ity na ao amin'ny famolavolana Content ao amin'ny modifier. Azonao atao koa ny mampifanaraka ny votoatin'ity votoatiny ity ao amin'ny famolavolana fanovozan-kevitra sy ny fampiasana CSS ho an'ity lahatsary ity ao amin'ny tranokala Advanced Advanced.
Ny reducer turbine unipolar WKS
WJ andian-dahatsary haingam-pandeha kankana WJ dia vaovao, tsara tarehy ny endrika, kely, Mavesatra amin'ny fotoana famoahana, misy ny fifindrana, misy feo kely. Afaka miray amin'ny milina elektrika na derailleur tsy misy dingana misy ny awl an'ny planeta UD mivantana, ny rafitra dia matevina. Ny fivoahan'ny kankana ho an'ny lavaka, ny fampifangaroan'ny mpampiasa ary ny fampiasan'izy ireo irery ihany koa, koa afaka mampifangaro ny mpiray tsikombakomba sy ny famaky tena, misy malefaka kokoa.
Udl hafainganana hafainganam-pandeha nmrv kankana fihenan'ny masomboly mpitaingina kodiarana vy fanodinana vy kankana fihenan-java-manidina motera miambina vy
Ny singa miady amin'ny kankana Servo dia manana karazany telo: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, miaraka amina kankana mitarika roa. Ny sisin'ny havoana kankana sy havanana mampiasa zoro firaka samihafa, ka mahatonga ny hatevin'ny nify hiova tsikelikely, mba hahafahanao mihetsika kankana hazo sy hanitsy backlash.
Boaty planeta planeta E3
Izahay dia manolo-tena hanatsara ny fiainan'ny olona sy ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny teknolojia fitantanana azo antoka sy mahomby ary azo antoka kokoa.
Ireo orinasa manome ireo vokatra sy serivisy ireo dia miankina aminay mba hanampy amin'ny famahana ny olana sarotra amin'ny fitantanana herinaratra, hydraulic ary mekanika eto an-tany. Satria tsy hohadinoinay mihitsy ireo zava-dehibe. Anjarantsika ny maka antoka fa mandeha tsara.
Total faritry ny orinasa
Injenieran'ny R&D matihanina
Concept an'ny orinasa
Orinasa mifikitra amin'ny tanjon'ny fitantanana kalitao voalohany, laza ambony.
Ny serivisy serivisy 24 × 7 dia iray amin'ireo serivisy tsara indrindra amin'ny orinasa.
Fanohanana serivisy 24 × 7 manome serivisy kalitao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Raha mila tsipiriany bebe kokoa, azafady mba jereo ny lisitry ny vokatra sy ny lisitry ny masinina.
Mitadiava antsipirihany teknika hisafidianana sy hividianana vokatra
Hanampy amin'ny fametrahana sy ny fanendrena izahay any an-tsaha.
Manamboatra / Manolo
Diagnostika ny olana ary fantaro ny hetsika fanitsiana.
INONA NO ATAON'NY MPANAVOTRA GEAR?
Eo amin'ny tontolon'ny fampitana herinaratra mekanika, be dia be ny faritra mihetsiketsika, ary mety hihasarotra haingana ny raharaha. Ny ampahany lehibe amin'ireto rafitra ireto dia ny boaty boaty - masinina mitambatra izay mamindra ny herinaratra avy amina mpamindra voalohany mankany amina entana. Gear reducers no ifantohan'ity lahatsoratra ity.
Amin'ireo milina tsotra enina sy tsotra, boaty fanodinana dia mazàna mampiasa ny Wheel and Axle ary / na ny Screw (reducer worm) hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fahazoana tombony mekanika. Ny motera dia namboarina matetika hiasa amin'ny "revolisiona isa-minitra" na RPM, ary raha toa kosa io haingam-pandeha io dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampiasana Drive matetika matetika, amin'ny tranga maro dia tombony kokoa ny fampiasana andiana fametahana voafaritra tsara mba hanitsiana izany hafainganam-pandeha izany ary hampitombo ny herinaratra.
Ohatra, raha misy môtô mivadika amin'ny 1800 RPM, ary ilay motera dia ampifandraisina amin'ny reducer gear 10: 1 dia hamoaka 180RPM ilay reducer. Raha io motera io ihany dia manana laharam-pahefana feno 30 kilao.ft., avy eo ny vokatra avy amin'ny reducer 10: 1 (mihevitra ny isa 85%) dia 255 lb.ft. manolotra fiakarana lehibe eo amin'ny habetsaky ny asa azo atao. Ny fampiharana mahazatra amin'ity karazana ity dia ny mpanera, izay ahitanao ny fahaizan'ny throughput dia mitaky hafainganana mihazakazaka sy fampitomboana herinaratra hamindra ireo fitaovana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Ny vokatra dia haondrana any Japon, Etazonia, Alemana, Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra hafa. Ny mpanjifanay dia misy mpanjifa OEM maro manampahaizana manokana amin'ny milina fananganana. Niara-niasa tamin'ny orinasa Fortune 500 maromaro izahay mba ho lasa iray amin'ireo mpamatsy fananganana orinasa lehibe ao Sina.
Izahay dia nanondrana ny vokatra ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ary nahazo laza tsara noho ny kalitaon'ny vokatra avo lenta sy ny serivisy aorian'ny fivarotana. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa na any an-trano na any ivelany mba hifandray aminay hifampiraharaha amin'ny orinasa, hifanakalo vaovao ary hiara-hiasa aminay.
mpiasa mihoatra ny 1500 izahay, ary manana milina fanodinana cnc sy ivon-toeram-piasana cnc.
Izahay dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy tsara indrindra any Sina, misafidy mpanamboatra kalitao, mpamatsy, mpanondrana ao amin'ny china-reducers.com
FANONTANIANA iraisana momba ny mpanala hetra
Rehefa tonga ny rafitra izay misy fihenan'ny fitaovana, dia misy fanontaniana roa mipoitra matetika.
"Ahoana no fomba fidiako ny reducer tsara indrindra amin'ny asako"
“Ny zavatra ananako izao dia tsy mandeha tsara. Ahoana no hahazoako rafitra tsara kokoa? ”
Ny fanontaniana roa dia tonga amin'ny fananana olona manana fahalalana sy traikefa marina hanampy anao amin'ny fananganana ny rafitry ny filamatra. Raha mpizara ianao dia tianay ny hiresaka aminao momba ny filan'ny reducer fitaovana, ary raha mila mpaninjara ianao dia tianay ny mampifandray anao amin'ny iray.
Ny reducers gear dia sarotra fa ny mifidy ny tsara tsy tokony hatao. HZPT dia manana safidy isan-karazany kalitao, azo itokisana, mora vidy fitaovana izay mifanaraka amin'ny filan'ny fambolena, agregat, solika sy gazy, logistika, fitrandrahana ary maro hafa!